Lux lohahevitra tsara ho an'ny Plasma 5 | Avy amin'ny Linux
Plasma 5 dia mifankatia ary milaza fa mpampiasa zatra ny tontolon'ny birao misy anao Linux Mint ny tranon'omby kanelina, fa mandalo ny fotoana ary mihatsara ny distros, tsy very maina ny fahatsapako ho toy ny ankizy manana kilalao vaovao miaraka am-pametrahana ahy manjaro-kde. Ary na eo aza ny pitsopitsony ara-teknika sasantsasany, manidina lalitra, dia tsara sy mora apetraka.
Fa ny hamita ny fametrahana serizy amin'ny mofomamy, endri-tsoratra roa izay tia ny famoronana Zavakanto ho an'ny Linux ary namorona tsara lohahevitra ho an'ny plasma 5 izay antsoina Lux, izay tsy atahorana ho diso, dia iray amin'ireo tsara indrindra (raha tsy hilazana hoe, io no tsara indrindra).
Minoa ahy, ry mpamaky malala, fa ny famaranana kanto an'ity lohahevitra ity dia hahatonga ny biraonao ho toerana mety kokoa, ary mino koa aho fa rehefa mandeha ny fotoana, ity lohahevitra ho an'ny plasma 5 ity dia hanatsara sy hanampy sary masina vaovao.
1 Inona ny Lux?
1.1 Gal Gallery Image
2 Ahoana ny fametrahana ny lohahevitra Lux amin'ny plasma 5
3 Famaranana momba ny Lux
Inona ny Lux?
Lux dia lohahevitra ho an'ny Plasma 5, novolavolaina tamin'ny voalohany Fabian alexis y David Linares (Mcder3), izay nanatevin-daharana ny hery hamoronana lohahevitra izay manambatra ny famaranana mangarahara sy ny loko mena, manome vokatra somary kanto nefa ambonin'izany rehetra izany dia tsy mahavoky ireo retina saropady.
Mba hahatonga ny lohahevitra dia noforonin'ireo mpamorona ny foto-kevitra maro momba ny macOS sy pixelperfect, fa koa tamin'ny asa teo aloha avy amin'izy roa, izay nanome fahamatorana ampy hamoronana vokatra somary mahomby izay miavaka samirery.
Zava-dehibe ny manasongadina ny fampiasana tsara ny aloka sy ny kalitaon'ny sary masina izay mamorona ny lohahevitra, ny fitambaran'izy ireo tonga lafatra dia manome fahatsapana halalinina izay tsy mitovy amin'ny mahazatra antsika.
Nilaza ny mpamorona fa nataon'izy ireo tonga lafatra ireo sary masina, na inona na inona ny vahaolana eo amin'ny birao (zavatra ankasitrahana ary be).
Ity lohahevitra ho an'ny Plasma 5 ity dia zaraina amin'ny alàlan'ny fahazoan-dàlana VOASARY MAKIRANA, ny antony fampiasan'izy ireo, dia tsy nohazavaina tamin'ny mpamorona azy «mamela antsika hifehezana bebe kokoa ny asa namboarina na fanovana (ny forks tsy misy dikany).
Gal Gallery Image
Ireo mpamorona an'ity lohahevitra plasma tsara tarehy ity dia nampakatra andiana pikantsary amin'ilay lohahevitra tianay hizara:
Ahoana ny fametrahana ny lohahevitra Lux amin'ny plasma 5
Ireo mpamorona ny lohahevitra Lux dia nandray am-pahamatorana ny zava-drehetra ary namorona script kely mamela antsika hametraka Lux haingana sy mora.
Mba hanaovana izany, sintomy fotsiny ny manaraka script, omeo fahazoan-dàlana hanatanterahana azy, alefaso ary avy eo mandehana amin'ny menio safidin'ny plasma ary safidio ny lohahevitra Lux.
Ity script fametrahana ity dia hanome antsika kinova Lux roa, ny kinova mahazatra an'ny Lux ary ny kinova fisaka mitovy anarana Lux Solid.
Famaranana momba ny Lux
Lux dia napetraka ao amin'ny Manjaro KDE ahy, hatramin'ny minitra voalohany navoakan'ny mpamorona azy, tena tiako ny fikarakarana nomen'izy ireo amin'ny antsipiriany, miaraka amin'ny loko tsara sy kanto.
Misy sary vitsivitsy izay tsy dia tiako loatra (noho ny antony tsy misy ahy hafa), saingy tsy voamariky ny kalitaon'ny ambiny. Ny fahatsapana ny halaliny dia tena azo tanterahina ary raha atambatrao amin'ny fiaviany tsara (izay saika tsy hitako mihitsy izany) dia heveriko fa manana birao azo eritreretina ianao.
Ny olana momba ny fahazoan-dàlana dia tantara iray hafa, ny fibaikoana ny asa dia ampahany amin'ny anjara biriky tokony homen'ny fiarahamonina an'ireo mpamorona zavakanto tsy dia be mpitia.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Lux lohahevitra tsara ho an'ny Plasma 5
Faly aho mahafantatra fa tena tianao ilay lohahevitra. Samy te hanatsara ny lohahevitra izahay sy i Fabian ary manomboka izao dia lazaiko aminao fa misy zavatra mahaliana tonga amin'ny fanavaozana voalohany 😛
Salama, azonao apetraka amin'ny Lubuntu ve ity lohahevitra ity?
Tsy miasa afa-tsy amin'ny Plasma 5 izy io.
Ary ny vokany dia mahafinaritra ... Manantena ny fanavaozana ho avy aho
Herman dia hoy izy:
Nosintomiko ilay script ary notanterahiko nanome alalana fampiharana azy, na izany aza tsy namorona ny lahatahiry tao amin'ny /home/.local/…/desktoptheme ... namerina ilay script aho tamin'ny anarana hafa ary nihazakazaka izany tsy nisy alalana famonoana ary noforonina ireo lahatahiry marina satria ny zavatra rehetra dia noforonina teo amin'ny sehatry ny mpampiasa.
Lohahevitra tena tsara, iray amin'ny zavatra tsara indrindra hitako tamin'ny plastika, mahonon-tena, tena mahafinaritra ny maso.
xokras dia hoy izy:
Salama, te hizaha toetra ny Lux amin'ny Manjaro KDE aho, fa raha vao sintomina ilay script dia tsy haiko ny manome alalana azy hanatanteraka sy hanatanteraka azy. Azonao atao ve ny milaza amiko ny fomba hanaovana azy?
Mamaly an'i xokras
khrysro dia hoy izy:
Amin'ny fomba sary dia azonao atao amin'ny fanomezana azy ny bokotra havanana, ary avy eo ny fananana, dia mankany amin'ny kiheba alalana ianao ary mifidy dia azo tanterahina.
Miaraka amin'ny console dia hisy olona hilaza aminao hampiasa chmod xxx filename.sh, angamba miaraka amin'ny fanazavana ny dikan'ny tarehimarika, aleoko ny maody sary.
Mamaly an'i khrysro
Tsy azoko. Aorian'ny fandefasana azy dia tsy hita eo anelanelan'ny sary masina izy io ary raha manandrana mametraka azy amin'ny rakitra aho dia milaza fa tsy mahita azy ...: - /
dia ny hoe tsy lohahevitra kisary, fa lohahevitra plasma
Ary inona no tianao holazaina amin'izany? Nanavao ny Plasma aho ary tsy afaka mametraka ny lohahevitra «Lux» Plasma ...
Lehilahy tsy azonao, plasma TEMA (toy ny hoditra) ny lohahevitra plasma fa tsy lohahevitra kisary, noho izany tsy ao anaty sary masina izy ireo, fa ao amin'ny faritra THEME WORKSPACE ... raha ho boriky ianao
Eny tokoa, tsy azoko ny zavatra ... ... izay matetika mitranga amintsika vaovao ary izany no antony anontaniako. Ankehitriny ny sofiko boriky dia hihena kely.
Manantena ny hametrahana azy aho fa manome ahy ny hadisoana mitovy foana
=== Misintona Lux ===: /root/.local/share/tmp/The-Lucis-Proyect
./Lux.sh: 42: ./Lux.sh: git: tsy hita
misy hevitra maninona?
kyd dia hoy izy:
mila apetraka git
Mamaly an'i kyd
Anjely C dia hoy izy:
Tena tsara. Ary efa ao anatin'ny latabatro sy amin'ny solosaina finday izy ireo. Misaotra anao.
Valiny tamin'i Angel C
Tapaka ny rohy ..
Salama hariva misy olona manana ny script fametrahana ary nampidina ny kinova farany aho fa tsy haiko ny mametraka azy raha tsy misy ny script. Misaotra anao.
Jonathan Morales-Salazar dia hoy izy:
Tapaka ny rohy
Valiny tamin'i Jonathan Morales Salazar